Tiako ny angona amin'ity tatitra ity avy amin'ny Buddy Media sy infographic avy amin'ny Fusework Studios. Ny angon-drakitra dia manondro ireo orinasam-pandraharahana tokony hifaneraseran'ny mpanjifa rehefa misy izy ireo, angataho ny mpanaraka azy ireo handray andraikitra ary hitazona ny hafatra ho tsotra. Mazava ho azy, mamporisika ny mpanjifanay hizaha toetra sy refy ihany koa aho. Angamba ireo mpifaninana aminao tsy mba mandefa bitsika amin'ny faran'ny herinandro - mety ho fotoana mety hahatonga anao hisarika ny saina.
Raha te-hahita ny antontan-kevitra rehetra ao ambadiky ny infografika ianao dia ampidino ny tatitra feno nataon'i Buddy Media, paikady ho an'ny mailaka mahomby: famerenana statistika. Ary, aza hadino ny mijery ny infografika anay antony mahatonga anao tsy voahaja ao amin'ny Twitter!